पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई क्यान्सर नभएको प्रमाणित, ट्यूमरको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने « Naya Page
काठमाडौं, १७ फागुन । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई क्यान्सर नभएको निष्कर्ष आएको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा उपचाररत डा. भट्टराईलाई न्युरो–इन्डोक्राइनको ट्युमरमा क्यान्सर भएको आशंकामा चिकित्सकले परीक्षण गरेका थिए ।
भट्टराईको गत फेब्रुअरी २२ मा भारतको दिल्लीस्थित यकृत उवं पित्त विज्ञान संस्थानमा स्वास्थय परीक्षण भएको थियो । उनले प्राडा विक्रम भाटियासँग परामर्श लिएका थिए । उनी मंगलबार (फागुन १८) गते नेपाल वायुसेवामार्फत काठमाडौं फर्कने छन् ।